Intel ရဲ့ ပထမဆုံး Graphic Card ကို ၂၀၂၀ မှာထုတ်လုပ်မယ်
13 Jun 2018 . 4:42 PM
လက်ရှိအချိန်မှာ ကွန်ပျူတာ Graphic Card တွေလို့ ပြောလိုက်ရင် Nvidia နဲ့ AMD ကိုပဲ ပြေးမြင်မိကြမှာပါ။ Nvidia ရဲ့ Graphic Card တွေက လက်ရှိအချိန်မှာ အကောင်းဆုံးလို့ ပြောလို့ရနေပြီးတော့ AMD ကိုလည်း တချို့သောသူတွေက အသုံးပြုနေကြပါတယ်။
ဒါပေမယ့် အခုလိုမျိုး Graphic Card တွေရဲ့ ယှဉ်ပြိုင်မှုမှာ အခု နောက်ထပ် Player တစ်ဦးဝင်ရောက်လာတော့မယ့်ပုံပါပဲ။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင် လက်ရှိမှာ အကြီးမားဆုံး Processor ထုတ်လုပ်သူတစ်ဦးဖြစ်တဲ့ Intel ကနေ Graphic Card တွေကို ၂၀၂၀ ခုနှစ်မှာ ထုတ်လုပ်သွားမယ်လို့ တရားဝင်ကြေညာလိုက်ပါတယ်။
Intel ဟာ လက်ရှိအချိန်မှာ CPU Processor ကိုပဲ ထုတ်လုပ်နေတာဖြစ်ပြီးတော့ Graphic Card ကို သီးခြားထုတ်လုပ်ခြင်းမရှိသေးဘဲ CPU Processor နဲ့ပဲ Onboard Graphic တွေပဲ ပါဝင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ အဲ့ဒီအတွက် အခုလိုမျိုး သီးခြား Graphic Card တွေကို Intel ထုတ်မယ်ဆိုတာက စိတ်လှုပ်ရှားစရာလို့ ပြောလို့ရပါတယ်။
Intel Graphic Card Rumor
Intel ဟာ ယခင်ကလည်း SSD ဈေးကွက်ကို ဝင်ရောက်ခဲ့ဖူးပြီး အခုလိုမျိုး Graphic Card ထုတ်ချင်တယ်ဆိုတာကလည်း Nvidia နဲ့ AMD ရဲ့ ဈေးကွက်ကို လုယူချင်ပုံပါပဲ။
Akhayar ပရိသတ်ကြီးရော လက်ရှိ Nvidia နဲ့ AMD Graphic Card တွေတင်မဟုတ်ပဲ Intel က Graphic Card ထုတ်လာမယ်ဆိုရင်ရော လက်ခံကြမှာလား?
လကျရှိအခြိနျမှာ ကှနျပြူတာ Graphic Card တှလေို့ ပွောလိုကျရငျ Nvidia နဲ့ AMD ကိုပဲ ပွေးမွငျမိကွမှာပါ။ Nvidia ရဲ့ Graphic Card တှကေ လကျရှိအခြိနျမှာ အကောငျးဆုံးလို့ ပွောလို့ရနပွေီးတော့ AMD ကိုလညျး တခြို့သောသူတှကေ အသုံးပွုနကွေပါတယျ။
ဒါပမေယျ့ အခုလိုမြိုး Graphic Card တှရေဲ့ ယှဉျပွိုငျမှုမှာ အခု နောကျထပျ Player တဈဦးဝငျရောကျလာတော့မယျ့ပုံပါပဲ။ ဘာဖွဈလို့လဲဆိုရငျ လကျရှိမှာ အကွီးမားဆုံး Processor ထုတျလုပျသူတဈဦးဖွဈတဲ့ Intel ကနေ Graphic Card တှကေို ၂၀၂၀ ခုနှဈမှာ ထုတျလုပျသှားမယျလို့ တရားဝငျကွညောလိုကျပါတယျ။
Intel ဟာ လကျရှိအခြိနျမှာ CPU Processor ကိုပဲ ထုတျလုပျနတောဖွဈပွီးတော့ Graphic Card ကို သီးခွားထုတျလုပျခွငျးမရှိသေးပဲ CPU Processor နဲ့ပဲ Onboard Graphic တှပေဲ ပါဝငျခဲ့တာဖွဈပါတယျ။ အဲ့ဒီအတှကျ အခုလိုမြိုး သီးခွား Graphic Card တှကေို Intel ထုတျမယျဆိုတာက စိတျလှုပျရှားစရာလို့ ပွောလို့ရပါတယျ။
Intel ဟာ ယခငျကလညျး SSD ဈေးကှကျကို ဝငျရောကျခဲ့ဖူးပွီး အခုလိုမြိုး Graphic Card ထုတျခငျြတယျဆိုတာကလညျး Nvidia နဲ့ AMD ရဲ့ ဈေးကှကျကို လုယူခငျြပုံပါပဲ။
Akhayar ပရိသတျကွီးရော လကျရှိ Nvidia နဲ့ AMD Graphic Card တှတေငျမဟုတျပဲ Intel က Graphic Card ထုတျလာမယျဆိုရငျရော လကျခံကွမှာလား?